७०० स्थानीय तहको नतिजा घोषणा, कांग्रेसको अग्रता कायमै – Satyapati
डुडुवामा कार्यपालिका बैठक सञ्चालनमा अवरोध, बजेट अनिश्चित
यातायात व्यवसायीलाई छुटैछुट, जनतालाई लुटैलुट !
भारतीय बन रक्षकले नै नेपालीको हत्या गरेको आशंका
सम्पदा संरक्षणमा युवाको भुमिका महत्वपूर्ण: मन्त्री अथक
ठेलामा मकै बेच्दा नगर प्रहरीको लछारपछार
काजुदेखि कटुससम्म किनेर खान्छन् नेपाली, ११ महिनामा एक अर्बको सुपारी आयात
अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द हुँदा वायुसेवा निगमलाई करोडौं घाटा
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ९ दिन बित्दासमेत अन्तिम मत मरिणाम घोषणा हुन सकेको छैन ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७०० स्थानीय तहको नतिजा घोषणा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहको प्रमुखतर्फ १२६ तथा अध्यक्षतर्फ ४४९ स्थानको नतिजा घोषणा भएको हो ।
जसअनुसार नेपाली काँग्रेसले १२४ प्रमुख र १८४ अध्यक्षमा जितेको छ । काँग्रेसले अझै पनि १० प्रमुख र ४ अध्यक्ष पदमा अग्रता कायमै राखेको छ । यस्तै नेकपा एमालेले स्थानीय तहका ६७ प्रमुख तथा १२१ अध्यक्ष पद जित्दा १५ प्रमुख र २ अध्यक्षमा अग्रता कायमै राखेको छ ।
यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले २४ प्रमुख र ९६ अध्यक्ष पद जित्दा अझैपनि प्रमुख २ पालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीले ९ प्रमुख जित्दा अन्य पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले २५ पालिका जितेका छन् ।
यस्तै गाउँपालिकातर्फ जसपाले २० स्थानीय तह जित्दा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत लगायतका पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले २४ पालिकामा जित हासिल गरेका छन् । हाल साना पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विभिन्न पालिकामा १५ स्थानमा अग्रता लिएका छन् ।a
आजबाट निषेधाज्ञामा थप कडाइ हुने
टिप्पर दुर्घटना हुँदा सात विद्यार्थीको मृत्यु
डिसीने अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक
Tweets by Satyapati100
भारत लैजाँदै गरेको २५० बोरा अफिमको दाना नियन्त्रणमा
भारतले फेरी थाल्यो घोषित नाकाबन्दी
कोहलपुरमा गुण्डागर्दी गर्ने ४ जना प्रहरी फन्दामा
सशस्त्र प्रहरीका ५६ इन्स्पेक्टर डीएसपीमा बढुवा सिफारिस (नामावली)
लुम्बिनी प्रदेश बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा
एक महिनामा एक अर्ब ७२ करोडको विद्युत भारत निर्यात
भर्खरै जन्मेको शिशु पनि प्रदर्शनीमा !
होटेल व्यवसायी र पैदल यात्रुु धमिलो पानी खान बाध्य
एक जुलाईको कालो दिन, ‘उकुसमुकुस हङकङ’